Hunt Showdown Hacks ats Ndị aghụghọ, Aimbot, ESP, Wallhack - Gamepron
Ichu nta: Ngosiputa Hacks
Chụ nta nnukwu anụ ma wepụ ndị iro n’enweghị ịkọ nkọ n’onwe gị! GamePron nwere ofchụ nta niile: Showdown ESP, Aimbot, Wallhack na ụdị aghụghọ ọ bụla ị ga - achọ.
Boughtzụtala Hchụ nta: Showdown Hack? Chọta usoro ndị ọzọ ebe a
Biko rụba ama: Tupu ị zuta ichu nta anyị: Ngosipụta ndị na-egosi iwe, gbaa mbọ hụ na ngwa ọrụ ị na-achọ ịzụta ka emelitere nso nso a ma ọ bụ ka dị n'ịntanetị. Ọ bụ ezie na anyị na-emelite ngwaọrụ anyị oge niile, ọ na-egbu oge n'oge nnyefe n'ọnọdụ ụfọdụ; mgbe ọ na-abụkarị ozigbo, ọ nwekwara ike were awa ole na ole. Ngwaọrụ anyị niile akpọchiri HWID, nke pụtara na ị ga - eji ha naanị n'otu kọmputa - gbaa mbọ hụ na kọmputa gị dakọtara na ngwaọrụ anyị niile tupu oge eruo. Agaghị enye nkwụghachi ụgwọ ọ bụla ozugbo ilele igodo ngwaahịa ahụ!
Ndi A Huru Anyi Ichu nta: Ngosiputa Hacks
ịzụta Ichu nta: Ngosiputa Hacks na 4 nzọụkwụ
Nchụ nta: Showdown Hacks, Aimbot, Norecoil, ESP, Wall Hacks & More
Bulie untchụ nta: Ngosipụta site na ọtụtụ nhọrọ nke egwuregwu dị na GamePron
Enwere ọtụtụ atụmatụ / hacks ịhọrọ site na ya, yabụ bulie ndị ị chere ga-enyere aka karịa!
Anyị na-ewere ego site na iji 100% echekwa (ma bụrụ naanị nke GamePron) usoro ịkwụ ụgwọ maka nchekwa ndị ahịa
Mgbe ịzụrụ, ịnwere ike iji igodo ngwaahịa gị nweta ma budata ichu nta anyị: Showdown Intel hack!
Gịnị kpatara WTW Hunt: Showdown Intel hacks?
Banye anataghị ikike n’ozuzu gị ga-adị ka usoro dị egwu, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị nwetụbeghị mbụ ya. Anyị chọrọ ka ndị mbido nwee mmetụta dị ka a ga - asị na ha nwere ike ịme ihe ọ bụla ebe a na GamePron, na Hchụ nta anyị: Showdown Intel Hack adịghị iche. Ọtụtụ ndị mmepe mbanye anataghị ikike ndị ọzọ na-anwa ịchọta etu ha ga - esi mejuputa ụyọkọ atụmatụ ndị na - abaghị uru na ngwaọrụ ha, mana anyị na - elekwasị anya na nsonaazụ. Chụ nta: Ngagharị bụ egwuregwu na-achọsi ike n'ihe gbasara ọkwa nka gị, ebe ọ bụ na ị gaghị alụ ọgụ maka nnukwu anụ, mana ị ga - echekwa maka ndị otu ndị ọzọ!
Ebumnuche kachasị nke egwuregwu a bụ ibudata map dị iche iche wee wepụta "anụ ọhịa anụ ọhịa" nke bi n'ime. Fọdụ n'ime ndị a nnukwu anụ bụ nnọọ grotesque, dị ka ị ga-alụ ọgụ megide amasị nke a ibu ududo ma ọ bụ ọbụna a dị ike amoosu! You'll ga- larịị elu gị na ngwá agha na odide dị ka ị na-enwe ọganihu site na egwuregwu, na-enye gị a dị nnọọ ike karị loadout na-arụ ọrụ mgbe niile na-ekwu na mere. Nke a bụ usoro na-ewe ọtụtụ egwuregwu ọnwa iji nweta, ma ị ga-enwe ike gbawara site n'ohu site na iji anyị untchụ nta: Showdown Intel Hack!
Ezigbo ziri ezi ga-ekpebi onye mmeri nke ọtụtụ agha, ọ bụ ya mere iji Hunt: Showdown Aimbot na-abụkarị ọdịmma gị. Ndị na-egwu egwu ga-akwado ụfọdụ egbe karịa ndị ọzọ, ebe ha niile na-enye stats dị iche iche ma "na-eche" mgbe oge ruru ịlụ ọgụ. Mgbe ị nwere ike ịlaghachi azụ na ichu nta: Showdown Aimbot achọtara ebe a na GamePron, ọ nweghị ụzọ ị ga-esi hụ onwe gị na njedebe nke ọgụ ọ bụla.
Karịa ihe ọ bụla ọzọ, ogo ahụ ga-abụ isi kachasị mkpa maka ntọhapụ ọ bụla achọtara na GamePron. Ma egwuregwu ahụ dị ọhụụ ma ọ bụ bụrụ ihe aha ochie, ị nwere ike ịtụ anya ịnweta ngwaahịa a tụkwasịrị obi na ntụkwasị obi n'oge ọ bụla.
Enweghịzi mkpa ịnye ndị mmepe mbanye uru nke obi abụọ, ebe ị nwere ike tinye okwukwe gị na ọrụ a ma ama dịka nke anyị. Ọ bụrụ na ị na-achọ ụzọ dị oke ọnụ iji tụgharịa onwe gị na chi egwuregwu, GamePron nwere ngwaọrụ niile achọrọ iji mee ya. Ekwela ego gị na Hunt ọzọ: Nkọwapụta Hacks nke na-ahapụ gị ịchọrọ karịa! Nweta Hunt anyị: Showdown Intel Hack taa wee hụ ihe kpatara ọtụtụ ndị ọrụ ji enwe ịhụnanya.
Nchụ nta: Showdown Wall Hack (ESP)
Chụ nta: Showdown Player ọmụma ESP (Aha, Ogwe ike, anya)
Chụ nta: Ngosipụta Nkebi ESP na nzacha
Chụ nta: Showdown Aimbot
Untchụ nta: Showdown iro ịdọ aka ná ntị alerts
Untchụ nta: Ngosipụta super jump mode (ọ dịghị ọdịda mmebi mgbe arụ ọrụ).
Untchụ nta: Egosiputa ọkpụkpụ & nzube isi configurable.
Ntughari: Ngosipụta nkwụghachi ụgwọ
Anyị Ichu nta: Ngosiputa Hack atụmatụ
Chụ nta: Showdown Intel Player ESP
Jiri ichu nta anyị: Showdown Intel Player ESP iji mata ndị iro na ndị otu site na ebe ọ bụla na eserese! Nwere ike ịnọ fọrọ nke nta ka ihe ọ bụla ị chọrọ site na ihe siri ike na-ebupụta na a mma.
Chụ nta: Ngosipụta Intel Player ozi ESP (Aha, Ogwe ahụike, anya)
Ọ bụghị naanị na ị ga-enwe ike ịhụ ụdị ọkpụkpọ ahụ site na ebe siri ike, mana ị nwere ike ịhụ ozi ndị ọzọ gbasara ebumnuche ahụ (dịka aha, ahụike, na ebe dị anya!).
Chụ nta: Showdown Intel Item ESP na nzacha
Nzacha na-eme ụwa ka ọ dị mfe karị, ị nwere ike ịnyagharịa mpaghara ESP n’enweghị nsogbu ọ bụla site na iji Nkebi ESP anyị na ọrụ Nzacha. Chọta ihe kachasị mma ngwa ngwa!
Chụ nta: Ngosipụta Intel Aimbot
Onye ọ bụla na-egwuri egwu n'oge gara aga maara na ha na-akwụghachi ndị ọkachamara kachasị ụgwọ ọrụ mgbe ọ bụla o kwere omume, Aimbot anyị na-enyekwa ha ohere iburu ìgwè.
Untchụ nta: Ngosipụta Intel Bullet track (dị irè na mkpụmkpụ na etiti etiti)
Mgbo Track bụ ezigbo maka mgbe ị na-achọ ịhụ ebe gbaa ala, ikwe ka ndị ọrụ iji gosi na-egbu ọtụtụ ihe ndị ọzọ ngwa ngwa.
Untchụ nta: Showdown Intel ọkpụkpụ & nzube isi configurable
Na-adịghị nnọọ nwere ịgba na-ekpe ekpere ọzọ! Zube kpọmkwem ebe ndị iro gị na-eji ichu nta: Showdown Aimbot na Ọkpụkpụ Prioritization.
Nchụ nta: Showdown Intel aimbot anya ndenye ego
Iji untchụ nta anyị: Showdown Intel hack with Aimbot Visible Checks ga-egbochi gị ịme "mmegharị na-adịghị mma" mgbe ị na-aghọ aghụghọ.
Nchụ nta: Ngosipụta Intel Recoil compensator
Iweghachite bụ nsogbu doro anya, ebe ọ na-aga imetụta izi ezi gị. Can nwere ike iji Recoil Compensator wepu ya na egwuregwu gị!
Untchụ nta: Showdown Intel iro ịdọ aka ná ntị alerts
Ọ bụrụ na onye iro nọ n'ọnọdụ ọ bụla iji kwatuo gị, ozi ịdọ aka na ntị ga-agbapụta na ihuenyo gị (na ị nwere ike ịhazi onwe gị, n'agbanyeghị!).
Untchụ nta: Ngosipụta Intel super jump mode (enweghị ọdịda mbibi mgbe arụ ọrụ)
Super Jump Mode ga-eme ka ndị ọrụ nọrọ na egwuregwu ahụ, ọbụlagodi mgbe ha ekwesịghị! Wepu mmebi ọdịda ọ bụla ị nwere ike were na atụmatụ a dị egwu.
Ndị gị na-arịa ọrịa na ike gwụrụ nke ịbụ ọkpọ ọkpọ maka ndị egwuregwu ndị ọzọ mechara chọta ebe kwesịrị ekwesị, ebe ngwá ọrụ a ga-agbanwe ụzọ ị na-egwu Hchụ nta: Ngosipụta kpamkpam. Don't na-adịghị ọbụna nwere ndị kasị dị ike na ngwá agha iji chọta ihe ịga nke ọma na ngwá ọrụ a nyeere, dị ka ị ga-enwe ike wepụ ndị iro na ihe ọ bụla ị nwetara (anyị na-ekwe nkwa na ọ!).
Hchụ nta na-ewu ewu: Showdown Intel Hacks and Cheats
Nchụ nta: Intel Showing na ESP na Wallhack
Hchụ nta ndị ọzọ: Showdown Intel Hacks and Cheats
Hchụ nta kachasị ewu ewu: Showdown Hacks na Cheats doro anya maka ndị jiri ha n'oge gara aga, mana ọ bụrụ na ị dị ọhụrụ maka echiche nke ịghọ aghụghọ ule, ị nwere ike ịtụkwasị obi na GamePron iji chebe gị. Ihe ndị kachasị ewu ewu na ụdị aghụghọ gị ga-abụ Aimbot, Wallhack, ESP, na ụfọdụ ndị ọzọ na-esonye na nhọrọ a. Mgbe enwere lobbies jupụtara na ọsụsọ, ị ga-alụ ọgụ n'ụzọ ọ bụla ị nwere ike!
Iji anyị na-achụ nta: Gosi Intel Hack ga-enye gị ohere ịba ụba na ụzọ karịa otu, ebe ị na-agaghị ebudata nbudata ihe eji egwu. Nwere ike iji ngwa a chepụta ebe ndị iro, gosipụtara ozi ịdọ aka na ntị, ma ọ bụ naanị wepụ asọmpi na-enweghị ohere ọ bụla maka imegwara. Ihe ọ bụla ị nwere ike ịtụ anya ịchọta na ichu nta: Showdown Hack nwere ike ịdị n'ime, yabụ gịnị kpatara ichere? Nweta ichu nta: Showdown Intel Hack taa wee mee ka ndị iro gị mara onye bụ onye isi.
Iji Aimbot bụ ihe dị oke mkpa ma a bịa n'ibe hacking, dịka na-enweghị otu, ị na-egbochilata ikike aghụghọ gị. Ndị na-aghọ aghụghọ n’emeghị Aimbot kwesịrị ekwesị na-efunahụ ohere ndị ọzọ, nke bụ ihe anyị na-anwale ma zere ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume ebe a na GamePron. Anyị chọrọ ka ndị ọrụ anyị jiri ihe niile ha nwere ike soro na Hunt: Showdown Intel Hack na eziokwu ahụ bụ na Aimbot gụnyere n'ime ụlọ ọrụ-ọkọlọtọ kwesịrị ime ka nke ahụ doo anya!
Anyị na-enye ndị ọrụ anyị niile ohere ịchụ nta # 1: Showdown Aimbot dị n'ịntanetị, anyị na-eme ya na enweghị oke. Ọ na-agụnye ọtụtụ nhọrọ enwere ike ịhazi ya, dị ka FOV Circle na-agbanwe agbanwe na Ezigbo Elu iji gbochie mmegharị na-adịghị mma. Nwere ike iji Bone Selector kwụsị kpọmkwem ebe ndị iro ahụ, ọ na-arụ ọrụ maka ihe odide niile na NPC's! Ọ na atụmatụ a Hardware emulated Mouse Aimbot, nke pụtara na ọ bụ otu n'ime ndị kasị dịrị nchebe ụzọ aghụghọ.
ESP na-anọchite anya nghọta dị iche iche, ọ dịkwa ka ị na-agbakwunye mgbakwunye uche na egwuregwu gị. Na-agaghị mgbe niile na-anụ ndị iro tupu ha nso nso ọgụ, na nke ahụ bụ isi nsogbu na egwuregwu na-achọ imekọ ihe ọnụ. Ọ bụrụ na otu onye na-apụ na stealth, dum ọrụ na-gbara! Iji anyị ESP na Wallhack ị na-ama mgbe niile banyere ebe ndị iro, yana ndị otu. I nwedịrị ike ịchọta ihe bara uru site na iji Ihe Itinye ESP na ọrụ nyocha, mana nke ahụ bụ mmalite.
Chọpụta njikọ nke onye ọ bụla site na ilele Enemy Info ESP (nke gosipụtara aha ha, nyocha ọnwụ, ụzọ dị anya, ma ọ bụ ọbụlagodi mmekọ). Ma ha bụ anụ mmiri ma ọ bụ ụmụ mmadụ, ọ dịghị mkpa! All nke Ekwensu, Meatheads, Spiders, na Immolators enweghị ike izochi ike gị.
Afia na ihe ndị ọzọ nwere ike imerụ gị agwa nwere ike hụrụ iji Nkebi ESP ọrụ dị ka nke ọma, ya mere, ọ dịghị mkpa ka nchegbu banyere n'itinyekwu bea afia na anyị hacks nyeere.
Akara ukwu bụ ihe ịtụnanya nke ga - eme ka ndị ọrụ GamePron anyị gbue ndị iro ha dịka a ga - asị na ha bụ nwamba buru ibu n’ime ọhịa! You nwere ike ịnwụde ndị na-emegide gị ma mee ka ha mata onye eze nke sava a nwere njirimara akara ukwu, ọ bakwara uru na egwuregwu dị ka untchụ nta: Ngosipụta. E nwere oge ebe ịchụ otu otu nwayọ ga-akwụ ụgwọ, ebe ha nwere ike imebi onye isi gị tupu ị kpọpụ ha (na onye isi ahụ)! To the victor goes niile nke ihe nkwata, nke mere na ọ dịkwa mkpa icheta High Damage Hack.
Nnukwu mmebi ga-eme ka ị jiri ike karịrị nke onye ọ bụla ọzọ wakpo gị, na-enye gị ohere n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu agha ọ bụla. Nwere ike ime ka featuredị ahụ dị egwu ma hụ otu ị si abịaru nso nke gị, tupu i jiri mbibi dị elu mechaa ha n'enweghị nchekasị ọ bụla. Gini mere ị ga - eji nye ndị na - emegide gị ohere ịlụ ọgụ?
Nri ichu nta: Showdown Hack abụghị mgbe niile ka ọ ga - abụ nhọrọ doro anya belụsọ na ị na - azụ ahịa na GamePron! Anyị nwere atụmatụ niile ewu ewu gụnyere n'ime ichu nta a: Ngosipụta ngosi, mana nke ahụ bụ mmalite. Ọbụghị naanị na anyị egboro mkpa ndị kacha ewu ewu arịọ si na nke anyị
Chụ nta: Showdown Hacks, mana anyị etinyela ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ a na-anaghị ahụkarị na ngwaọrụ nke ụdị okike a. Developersfọdụ ndị mmepe ga-ama Wallhack na Aimbot ụra ọnụ wee hapụ ngwaahịa ahụ, mana anyị chọrọ ịgafe na nke ahụ.
Enwere ike iji atụmatụ ịdọ aka na ntị gosipụta ozi ahaziri na ihu gị mgbe ọ bụla onye iro dị nso, na-enye gị ohere ịnakọta nchịkọta gị ma gakwuru ọnọdụ ahụ nke ọma. Egwuregwu nwere ike na-egwuri na ihuenyo na nke a cheat nyeere, na ị pụrụ ọbụna iji HWID Spoofer na-abịa n'akụkụ Hunt: Showdown Intel zere gara aga mmachibido. You'll ga-gbanyụọ Nchedo iji hụ na mbanye anataghị ikike abụghị ụgha, n'ihi na ọ gaghị arụ ọrụ nke ọma ma ọ bụghị.
Nchụ nta: Showdown Hacks ajụjụ
Gịnị kpatara anyị ji achụ nta: Showdown Intel Hacks
Anyị na-elekwasị anya na mma na ntọhapụ ọ bụla, nke ahụ bụ nkwa. GamePron na-ejikọ ndị ọrụ yana hacks ndị a pụrụ ịtụkwasị obi maka egwuregwu niile kachasị amasị ha kemgbe anyị mepere, ọ bụ ya mere ndị ọrụ ji anọgide na-adabere na anyị. Chọta a pụrụ ịdabere na isi iyi ị nwere ike mgbe niile na-aga n'ihi na gị hacks dị mkpa! Enweghị ngwaọrụ a pụrụ ịdabere na ya, ị na-egwu egwu na-ezighi ezi.
Ihe kpatara Hchụ nta anyị: Ngosipụta Intel Aimbot
Ejighi ekike kee nha anya, ihe anyị ma. Ọ bụghị naanị na anyị nwere ike iji obi sie gị ike na nke a bụ Hunt kacha mma: Showdown Aimbot n'ịntanetị, mana ndị ọrụ anyị ga-akwado nkwupụta ahụ. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịbanye ma debekwa ọdịdị eke, iji Hunt: Showdown Intel Aimbot bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na nhọrọ kacha mma ị nwere.
Gịnị kpatara Hchụ nta anyị: Ngosipụta Intel ESP
Na nri ESP eji Aghọ Aghụghọ Ule, ọ dịghị a mkpụrụ obi na mbara ala a ga-enweta dobe na ị. Shotgba agba n’azụ ga-abụrịrị otu n’ime ihe ndị na-akpasu iwe nke metụtara onye ọ bụla na-agba ụta, na ichu nta: Ngosipụta adịghị iche! Zere ndakpọ olileanya na anyị ESP mma.
Ihe kpatara Hchụ nta anyị: Ngosipụta Intel Wallhack
Wallhacks dị ka ngwa ESP, n'echiche na ị ga-ahụ mgbe niile ebe ndị iro nọ. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọpụta ihe kpatara ịhụ ndị na-emegide ibe ya na mgbidi ji bụrụ nnukwu uru, ị nwere ike chọọ inyocha isi gị! Ọbụghị naanị na ị ga - enwe ike ịchebe ndị agha zoro ezo na - enweghị nsogbu, mana ị nwere ike “igbanwe mgbidi” mmadụ ole na ole na usoro ahụ.
Ihe kpatara Hchụ nta anyị: Ngosipụta Intel Norecoil
Agaghị akpọghachi Recoil gaa emume ncheta ọmụmụ ọ bụla, mana nke ahụ dị mma! Kwesighi ịta ahụhụ nke egbe egbe ọzọ, ebe ị nwere ike ịme ka ọrụ anyị NoRecoil ma weghaara onye ọ bụla nke na-anwa iguzo n'ụzọ gị. Ọ dịkwa oke mma ịnọrọ aghụghọ mgbe ị na-egwu aghụghọ ebe ọ bụ na enweghị usoro ịkpaaka akpaaka na-ewere ọnọdụ.
Etu ibudata ihe kacha mma untchụ nta: Showdown Intel hacks?
Naanị ị ga-azụta igodo ngwaahịa sitere GamePron wee nwee ike ịga! Anyị emeela usoro nbudata nke aghụghọ anyị n'ụzọ kwụ ọtọ ka ndị mbido 'wee nwee ike ịgafe ya na enweghị ntụpọ n'okporo ụzọ. Enweghi akụkụ intrusion n'ime usoro a, ebe ọ bụ na ịnweghị iji aka gị wụnye ihe ọ bụla n'ime folda.
Gịnị mere ịchụ nta gị: showdown Intel hacks dị oke ọnụ karịa ndị ọzọ
Ọ bụ ezie na ọ ga-adị oke ọnụ ma e jiri ya tụnyere ndị ọzọ dị ala na ndị dị ọnụ ala karịa ebe ahụ, anyị bara ezigbo uru ma e jiri ya tụnyere ọrụ ndị na-eme mkpọtụ “adịchaghị”. Ọbụghị naanị nke ahụ, mana aghụghọ anyị niile nwere nchekwa 100% ma enwere ike ịnye ya naanị ọnụọgụ ole na ole nke ndị ọrụ n'otu oge. N'ihi ya, anyị agbanweela ọnụego ya.
Enwere oge ga - adaba na mkpa onye ọ bụla, ebe anyị anaghị ekwenye n’ịkpọchi ndị ahịa anyị n’ime nkwekọrịta ha achọghị ịbụ akụkụ nke. Nwere ike ịhọrọ ịzụta igodo ngwaahịa ga-enye gị ohere ịnweta ichu nta anyị: Ngosipụta Intel mbanye anataghị ikike maka ụbọchị 1, izu 1, ma ọ bụ ọbụlagodi ọnwa 1. You ga-ekpebi oge ole enyere gị aka ichu nta: Showdown Intel Hack, ma ọ bụghị na GamePron na-ekpebi maka gị.
Awesome Ichu nta: Ngosiputa Hack atụmatụ